VR भिडियो र छविहरू हेर्नको लागि एप। 3D, 180, 360 मा अनलाइन केटीहरूसँग लाइभ VR च्याट। नि:शुल्क, वेब, आईफोन, एन्ड्रोइड।
सर्वश्रेष्ठ अनलाइन वीआर भिडियो च्याट
च्याट केटीहरु को लागी स्ट्रिम र अरु संग आफ्नो सामग्री साझा गर्न को लागी सबैभन्दा राम्रो सेवा हो। संसार संग तपाइँको चासो साझा गर्नुहोस् र नयाँ ग्राहकहरु पाउनुहोस्!
यो च्याट मा साइन अप गर्न को लागी जरूरी छैन, मात्र फोटो र भिडियोहरु को लागी नि: शुल्क, कुनै पञ्जीकरण को आवश्यकता छैन। वैसे, प्रसारण दर्ता हेर्न को लागी पनि आवश्यक छैन।
३ live० प्रत्यक्ष प्रसारण
लाइभ भिडियो च्याट नि: शुल्क। प्रत्यक्ष प्रसारण र च्याट मा सामग्री प्रकाशन गरेर आफ्नो भाग्य बनाउनुहोस्। तपाइँको सामग्री तपाइँको अतिरिक्त आय को एक साँच्चै शक्तिशाली स्रोत हुन सक्छ।
VR रूले cams
हाम्रो अनलाइन भिडियो च्याटलेट को उपयोग गरेर ग्रह को 170 देशहरु बाट तातो केटीहरु लाई भेट्न को आनन्द लिनुहोस्। मित्रता, प्रेम वा अरु केहि तपाइँ यू लाइभ च्याट मा चाहानुहुन्छ! आफूलाई मनपर्ने सामग्री मा आफैलाई डुबाउनुहोस् र तपाइँ के मा रुचि राख्नुहुन्न भनेर बिर्सनुहोस्। U LIVE संग तपाइँ अन्य च्याटलेट विकल्प को बारे मा बिर्सनुहुनेछ!
3D वीआर केटीहरु
भिडियो विकल्पहरु को विशाल संख्या कि chatroulette वेबसाइटहरु को अधिकांश मा उपलब्ध छैन। सबै धाराहरु धेरै शुरुवात बाट उपलब्ध हुनेछ र तपाइँ वास्तव मा के तपाइँ सबैभन्दा मनपर्ने छनौट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। च्याट रूले मा भाग लिनुहोस् र बिभिन्न भिडियो च्याट स्ट्रिमहरु को धेरै मा रमाईलो छ। केटीहरु लाई भेट्नुहोस् तपाइँको हरेक इच्छा पूरा गर्न को लागी तयार छ।
प्रत्यक्ष VR स्ट्रिमि
विदेशीहरु संग भिडियो च्याट। कुराकानी मा १ over० भन्दा बढी देशहरु बाट महिलाहरु संग मिति, जो कोहि तपाइँलाई मनपर्छ उठाउनुहोस्! हाम्रो सुन्दरता च्याट संग एक जीवन्त च्याट मा संलग्न कुनै पनी तपाइँ जहाँ बाट हुनुहुन्छ नि: शुल्क कुराकानी गर्नुहोस्। ध्यान को संकेत देखाउनुहोस्-उपहार दिनुहोस् र निजी एक-मा-एक प्रसारण संगठित गर्ने व्यवस्था-यू लाइभ संग यो एक महिला प्रभावित गर्न एक समस्या हुनेछैन !.
सर्वश्रेष्ठ VR भिडियो
एक वीआईपी सदस्यता संग तपाइँ कुनै सीमा र प्रतिबन्धहरु को बारे मा बिर्सनुहुनेछ। मिनेट गिनती रोक्नुहोस् र कुनै पनि प्रसारण हेर्दै पूर्ण विश्राम पाउनुहोस्। एक वीआईपी सदस्यता संग, तपाइँ धेरै प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ। र केटीहरु लाई कुनै हतार छैन जो दर्शकहरु जस्तै।